रवीलाई शालिकरामले फसाएको खुलाशा : सम्झना र अस्मितालाई शालिकरामले चरम यातना दिएका थिए ! | Diyopost
रवीलाई शालिकरामले फसाएको खुलाशा : सम्झना र अस्मितालाई शालिकरामले चरम यातना दिएका थिए !
भनिन्, ‘शालिकरामले अस्पतालका चिनेजानेका सबैलाई अस्मितालाई श्रीमतीकै रूपमा चिनाएको थियो । तर पछि पो थाहा भयो, उसले अनेक घुर्की देखाएर अस्मितालाई मानसिक दबाबमा राखेको रहेछ ।’ त्यसो त शालिकरामले अन्य केही पत्रकार साथीहरूलाई समेत अस्मिता आफ्नी श्रीमती रहेको बताएको देखिन्छ ।शालिकरामले आफूले अस्मितालाई जागिर लगाइदिएको बताए पनि अस्पतालका अध्यक्ष केदारनरसिंह केसीले अस्मिताले खुला प्रतिस्पर्धामा नाम निकालेको दाबी गरे । ‘अरू धेरै कुरा त मलाई थाहा भएन । तर शालिकरामले भनेर नाम निस्केको भने होइन,’ केसीले भने ।
सम्बन्धको उतारचढावनिम्न मध्यमवर्गीय परिवारकी आठ सन्तानमध्येकी एक अस्मिताले एसएलसी पास गरेपछि सुनसरीको इनरुवास्थित एक कलेजबाट तीनवर्षे नर्सिङको प्रमाणपत्र तह पढेकी थिइन् । पढाइ सकिएपछिका केही महिना उनी गाउँ गई बसिन् ।
एक दिन शालिकरामले राति ९ः५५ मिनेटमा अस्मितालाई म्यासेज गरेर आफू घरअगाडि रहेको र जसरी पनि कि फोन उठाउन कि घरबाहिर आउन दबाब दिएका थिए । उनले आफूलाई नभेटे वा फोन नउठाए सम्बन्धको कुरा दाइलाई भनिदिने भन्दै अस्मितालाई दबाब दिएको देखिन्छ । उनले ८ बजेर ५५ देखि १० बजेर ९ मिनेटको बीचमा पठाएका चारवटा म्यासेज यस्ता छन्—८ः५५– कसम अब त अति भयो। तिम्रो दाइलाई भन्छु ।९ः५५– म कसम दाइसँग कुरा गर्छु । अब जे हुन्छ हुन्छ, नत्र एक पटक फोन रिसिभ गर त ।१०ः०७–तिम्रो रुमअगाडि आएको छु । बोलाऊ, कि हर्न बजाको छु सुन । फोन रिसिभ गर ।१०ः०९–कसम गेट ढकढक गरेर नाम लिएर बोलाउन नपरोस् है ।
रविलाई शालिकरामको म्यासेजअस्मिता र शालिकरामबीचको कुराकानीका प्रत्येक प्रमाण केलाउँदा सञ्चारकर्मी रवि लामिछाने शालिकराम र अस्मिताबीचको सम्बन्धबारे उति धेरै जानकार देखिँदैनन् । रविको ख्यातिलाई शालिकरामले बारम्बार भजाउन खोजे पनि उनीहरूको कुराकानीमा रविको कुनै भूमिका रहेको प्रसंग देखिँदैन ।
कान्तिपुर दैनिकमा जनकराज सापकोटाले लेखेको खबर यहाँ साभार गरिएको हो ।